”Fadlan yaan lay TARXIILIN!” – Maxaad kala socotaa warqad catoow ah oo uu qoray Trump awoowgii si aan loo musaafurin! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Fadlan yaan lay TARXIILIN!” – Maxaad kala socotaa warqad catoow ah oo...
”Fadlan yaan lay TARXIILIN!” – Maxaad kala socotaa warqad catoow ah oo uu qoray Trump awoowgii si aan loo musaafurin!
(New York) 16 Luulyo 2019 – Ma ogtahay in awoowihii Jarmanka ahaa ee Donald Trump uu Qaysarkii Jarmanku ku amray in dalka looga musaafuriyo wareegto boqortooyo isagoo lagu amray in aanu abid dib ugusoo laabanin Jarmanka, gaar ahaan gobolka Bavaria.
Friedrich Trump ayaa warqad catoow ah oo uu ku baryootamayo deeto qoray 1905-kii markii uu dib ugu laabtay Jarmanka isagoo jiidaya xaaskiisa iyo gabadhiisa kaddib markii uu kasoo laabtay Maraykanka oo uu horay ugu tahriibey.
Yeelkeede, madaxdii Jarmanka ayaa u jaray warqad ku wargelinaysa inuu 8 maalmood uga boxo dalka Jarmanka, iyadoo lagu haystey inuu diidey ka qayb qalka ciidamada dalkaasi oo xilligaa waajib qaran ahayd iyo inuu diiwaan geliyo u bixitaankiisii Maraykanka oo xilligaa laga joogey 20 sanadood.
Trump awoowgii ayaa deeto qoray warqad calaacal ahayd oo waxyaabaha uu ku xusay ay ka mid ahayd sawir uu ka bixiyay qaabka uu dareen ahaan u guddoomey khabarka tarxiilkiisa oo uu ku sifeeyay “sida biriq uga soo dhacday cir bilaa caad ah”.
“Cabdi baa ciddayda cuuryaamisey. Xaaskaygu waa gariirtey, gabadhayduna waa jiratey. Maxaa naloo tarxiilayaa? Arrintani waa mid aad ugu adag qoskayga,” ayuu qoray isagoo baryootamaya.
Warqaddan oo af Jarman ku dhignayd balse Ingiriisi loo rogey ayaa lagu qoray Harper’s Magazine, waxayna muujinaysaa sida uu Mr Trump u jeclaa inaan laga cayrinin Bavaria.
Mr Trump ayaa ku dhashay tuulada Kallstadt, oo ka tirsan gobolka Rhineland ee Galbeedka Jarmanka 1869-kii.
Wuxuu deeto dalkiisa ka tahriibey isagoo 16-jir ahaa isagoo Maraykanka tegey, halkaasoo uu ku qaatay tababar ku saabsan sida timaha loo jaro si uu timajare u noqdo, wuxuu sidoo kale markii dambe samaystay makhaayad wax laga cuno iyo meel lagu iibiyo naagaha jirkooda ka ganacsada (brothel) isagoo sidaa ku bilaabay hantida uu maanta Trump ku faanayo.
Waloow uu warqaddaa qoray, Mr Trump waa laga tarxiilay Bavaria isagoo dib ugu noqday New York, oo ah halka ay tafiirtiisu ilaa maanta deggan yihiin.
Trump oo ay taariikhdiisu tahriib iyo tacabbur shalay uun ahaa kasoo jeeddo ayaa maanta noqday madaxwaynihii ugu darraa dadka soo galootiga ah, ugu yaraan taariikhda casriga ah.
Previous articleFARAGELIN HAA, FARAGELIN MAYA! Madoobe wuxuu wadaa siyaasad ay madaxa masaari uga dhacday!
Next articleGabdho Soomaaliyeed oo shaqaalihii ku kiciyay shirkadda Amazon (Ogoow sababta)